Lohan'ny varingarina, Manifold mihinana, Fantsom-pahafahana maty aluminium - Yongyu
AJM Aluminium varingarina lohan'ny 03G103351C / 03810335 ...
BYT Aluminium lohan'ny varingarina 06H103064A
D4CB-VGT alim-bolan'ny alimina 22100-4A210 / 22 ...
FICE3481M / E / N lohan'ny varingarina aluminium 0200KC
F1AE lohan'ny varingarina Aluminium 504049268
1005B452 lohan'ny varingarina aluminium 4D56U / 4D56HP
4D56 Aluminium lohan'ny varingarina MD109736
WEWLAT lohan'ny varingarina aluminium WE01-10-100K
DW8DW8T lohan'ny varingarina aluminium 02.00.CP
F8Q600 Aluminium lohan'ny varingarina 7701478460
ZD30 Aluminium lohan'ny varingarina 7701058028
WL lohan'ny varingarina Aluminium WL1110100E
Taizhou Yongyu Industrial CO., LTD. dia naorina tamin'ny 1994. Ny orinasa dia nanolo-tena tamin'ny famokarana solika aluminium nandritra ny 20 taona mahery. Ny velaran'ny orinasa ankehitriny dia manana velaran-tany fananganana 43000 metatra toradroa ary mampiasa olona mihoatra ny 300. Izy io dia manana ekipa fitantanana avo lenta ary mpiasa matihanina sy teknika mihoatra ny 80. Mpamatsy ara-bola OE matihanina ity orinasa ity izay mifantoka amin'ny famoahana hery misintona,fanariana tsindry ambany ary fanariana maty. Ny fampandrosoana, fanariana sy famokarana ny fahaizan'ny orinasa mitarika amin'ny indostria iray ihany. Ny orinasa dia manafatra milina marobe sy fitaovana fanandramana avo lenta, mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy hahatratrarana ny takian'ny kalitaon'ny OE. Noho izany dia mamorona ho azy ny tombony azo amin'ny fifaninanana tsena, ary nomena ny vokatra manerantany izay nahazo ny fankasitrahan'ny mpanjifa.
marika azo ampiharina
Ny ekipanay mivarotra dia nanatrika ny Automechianika ...
Ny ekipanay mivarotra dia nanatrika ny fampisehoana Automechianika Shanghai tamin'ny 31 Desambra2019.
Tamin'ny 9 Jona.2017, ny sekretera an'ny Yuhuan munic ...
Tamin'ny 9 Jona.2017, tonga tao YONGYU ny sekreteran'ny antoko kaominin'i Yuhuan sy ny tariny mba hanao fikarohana. Niresaka fatratra ny zava-bita azon'i YONGYU izy tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary namporisika ny olona rehetra amin'ny seza miasa amin'ny fiara sy moto ...
Varotra fiara eny amin'ny tsenan'i Etazonia
Manaraka ny fanadihadian'ny goodcarbadcar, ny fivarotana fiara amin'ny tsenan'i Etazonia tamin'ny 1 Mey 2020 dia very eo amin'ny 20% noho ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Jereo ny tabilao data, ny varotra Hyundai dia nihena manodidina ny 38% noho ny tamin'ny taon-dasa tamin'io volana io ihany. Varotra Mazda wa ...
? Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra.